Abwaan guure oo garoowe kusugan “Laba arin ayaa sabab u ah dhibaatada kajirta dalka”. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Abwaan guure oo garoowe kusugan “Laba arin ayaa sabab u ah dhibaatada kajirta dalka”.
Abwaan Cismaan Cabudllaahi Guure oo kamid ah murti-maalka Soomaaliyeed ahna suxufi rugcaddaaya oo warbaahinno kala duwan ka soo shaqeeyay ayaa sheegay in uu aad ugu riyaaqay amniga iyo xasiloonida ka jirta magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland.
Abwaanka oo ka yimid magaalada Muqdisho si uu uga qeyb-galo bandhiga Buugaagta ee shalay laga daah-furay Garoowe ayaa sheegay in uu xorriyad dareemay kadib markii uu soo gaaray caasimadda Puntland maadaama ay tahay meel nabdoon oo aan wax cabsiya ka jirin.
“Garoowe waxaa naloo ku soo dhoweeyay si aad u qiima badan Xalayna aniga oo lugaynaya ayaan magaalada dhex wareegay sababtoo ah meeshan ka imid mudda dheera noogu dambaysay in aan si xorriyad ah u lugayno” ayuu yiri Guure.
Abwaanka ayaa tilmaamay in Garoowe iyo guud ahaanba Puntland nabadda iyo xasiloonida ka jirtay ay sabab u tahay midnimada iyo wadajirka ay muujiyeen reer Puntland si aan cadowgoodu uga dhex faa’idaysan taasina ay ak dhaxleen amni iyo horumar.
Dhinaca kale abwaanka oo soo hadal qaaday xaaladda guud ee Soomaaliya ayaa sheegay in dalku ka degi la’yahay laba cudur oo kala ah Qabyaaladda iyo kooxaha argagixisada ah ee shacabka xasuuqaya isagoo ku taliyay in labadaasi cudurba qalinka lagula dagaallamo maadaama la joogo bandhig-aqooneed.
Previous articlePuntland oo soo bandhigaysa qaraxyada dowladda Qatar ay ka fulisay deegaanadeeda.
Next articleDaawo:- Xisbiga Wadani oo afka furtay “Muuse Biixi waa kaligii taliye”.
Cali July 24, 2019 At 6:44 pm
Dalka waxuu ka dagi layahay adiga guure ah iyo qabiilkaga walee somaliya dhibato kale ma haysto ee mahadsalad iyo fiqi abdiraxman abdi kashkuur guureceel geey dhibato aan idinka ahayn somali mahaysto